Lesson 0.1 – What is Arduino? – EasyDevBoards
Home / Arduino / Training / Lessons / Lesson0– Prerequisites / Lesson 0.1 – What is Arduino?
Arduino ဆိုတာ အလွယ်တကူ သုံးလို့ရအောင် စီမံထားတဲ့ “စမ်းသပ်တီထွင် နမူနာ ပြုလုပ်ခြင်း စနစ်” (Prototyping Platform) ဖြစ်ပါတယ်။ Arduino မှာ Program ရေးပြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို စမ်းသပ်တီထွင်ကြည့်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မှာ အလွယ်တကူသုံးနိုင်တဲ့ Hardware တွေ၊ Software တွေ ပါဝင်ပြီး အဲဒါတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ချိတ်ဆက်နေစရာမလိုဘဲ အသင့်သုံးနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် လွယ်သလဲဆိုရင်တော့ အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်ကို သင်ယူလေ့လာစရာ မလိုဘဲ သာမန် အလယ်တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အဆင့်လောက်အထိ သုံးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။
Arduino ကို သုံးဖို့အတွက် Programming အခြေခံကို သိဖို့ လိုပါတယ်။ အခြေခံ အဆင့်လောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် မသိတဲ့သူတွေလည်း အလွယ်တကူ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ C/C++ language ကို သုံးပြီး ရေးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် C programming ကို လေ့လာထားပြီးသား ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Arduino ကို သုံးဖို့အတွက် ပထမဆုံး လိုအပ်တာကတော့ Arduino software ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို https://www.arduino.cc/en/Main/Software မှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ယူနိုင်ပါတယ်။ Windows/Mac/Linux စတဲ့ ကွန်ပျူတာ Operating System အားလုံးအတွက် Arduino Software ရှိပါတယ်။
Software ရှိပြီးပြီဆိုရင်တော့ Hardware လိုပါမယ်။ ပုံမှာ ပြထားတာကတော့ Arduino Uno လို့ ခေါ်တဲ့ အသုံးအများဆုံး Arduino Hardware ဖြစ်ပါတယ်။ Original ဆိုရင်တော့ US Dollar ၂၀ ကျော်ကျော်လောက်နဲ့ ရနိုင်ပြီးတော့ တခြားနေရာက ထုတ်တာတွေဆိုရင်တော့ ဒီထက် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Arduino Uno ဟာ အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်မယ့် ကွန်ပျူတာသေးသေးလေး တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ တကယ့်ကွန်ပျူတာလို မဟုတ်ဘဲ အီလက်ထရောနစ်နည်းနဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေကို လုပ်ပေးမယ့် ပစ္စည်းဖြစ်တာမို့ ဒီလို Hardware မျိုးကို Microcontroller လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ Arduino Uno ကို USB ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ တီထွင်စမ်းသပ်ခြင်းတွေ စတင်ဖို့ အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
(ဒီသင်တန်းမှာတော့ Arduino Hardware ကို မဝယ်ဘဲ စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Arduino Program ကို Hardware ပေါ် မတင်ခင်မှာ စမ်းကြည့်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ Arduino Uno Simulator ကို အသုံးပြုပြီး သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)